Carl Henry Global - Olee otú anyị nwere ike isi nyere gị aka - nhọrọ gị!
Mgbe ị na-ekpebi ịbịakọta usoro ịntanetị ị nwere ike ịchọrọ enyemaka ụfọdụ dabara na ọkwa gị, i nwere nhọrọ nhọrọ 3;
Nchọnya (Gosi gị)
Chọta onye ka o gosi gị otu esi eme ya site na iji ozi dị ka usoro a na-akwado mgbasa ozi. Nke a bara uru ma ọ bụrụ na i nwere oge dị ukwuu iji mụta ihe na ịchọrọ ịbelata ego mbụ ị ga - eme.
NKWUKWU (Na Gi)
Mee ka mmadu soro gi mee ya ma nye gi enyemaka ị choro mgbe ichoro. Nke a bụ echiche echiche n'etiti oge na ego achọrọ ịmalite, ị nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ ma naanị nweta enyemaka anyị dịka ịchọrọ ya, ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ya!
Ọrụ (Maka gị)
Mee ka onye ọ bụla setịpụrụ gị 100%, nke a zuru oke ma ọ bụrụ na ego dị, oge ga-abụrụ gị nsogbu, n'ihi na anyị na-eme nke a n'oge niile anyị nwere ike mezue ọrụ na njedebe nke oge ọ ga-ewe ya na nke mbụ .
Anyị na-ewe nchebe gị!
"Anyị na-ewere gị nche kpọrọ" - Carl Henry Global emewo kwalite anyị Bochum na-a ala website - na-abịa n'oge na-adịghị ụfọdụ ibu online azụmahịa ohere !!